Jacaylka iyo Awoodda Bogsashada ee Taabashada - Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Blog Jacaylka iyo Awoodda Bogsashada ee Taabashada
Jacaylka iyo awooda bogsiinta taabashada ayaa muhiim u ah samaqabkayaga maxaa yeelay waxay naga dhigayaan inaan dareemo amaan, daryeel iyo wax kayar careysan. Goormaa kuugu dambeysay taabashadaada? Si aad wax badan uga ogaato, BBC waxay sameysay sahan loo yaqaan Tijaabada Taabashada oo ku saabsan dareenkan oo aan aad loo baarin. Sahankan ayaa socday intii u dhaxeysay Janaayo iyo Maarso ee sanadkan. Ku dhowaad 44,000 oo qof ayaa ka qayb qaatay 112 dal oo kala duwan. Waxaa jira barnaamijyo taxane ah iyo qoraallo ku saabsan natiijooyinka sahanka. Waa kuwan waxyaabaha muhiimka ah ee nooga yimid dhowr ka mid ah waxyaabaha la daabacay:
Saddexda erey ee ugu caansan ayaa loo adeegsaday sharax taabasho waa: "nasteexo", "diiran" iyo "jacayl". Waa wax lala yaabo in “raaxada” iyo “diirimaad” ay ka mid ahaayeen saddexda erey ee ugu badan ee dadku ku adeegsadaan gobol kasta oo adduunka ah.
In ka badan kalabar dadku waxay u maleynayaan inaysan haysan taabasho ku filan noloshooda. Sahankan, 54% dadku waxay sheegeen inay aad ugu yar yihiin taabashadooda noloshooda halka 3% kaliya ay sheegeen inay aad u badan yihiin.
Dadka jecel taabashada shakhsiyaadka waxay u muuqdaan inay leeyihiin heerar sare oo fayoobaan iyo heerar hoose oo kalinimo ah. Daraasado badan oo hore waxay muujiyeen sidoo kale in taabashada la isku raacsan yahay ay noogu fiican tahay jir ahaan iyo maskax ahaanba.
Waxaan isticmaalnaa noocyo kala duwan oo ah fiilooyinka dareemayaasha si loo ogaado noocyada taabashada.
Dareemayaal gaar ah
“Xadhkaha dareemayaasha degdega ah waxay ka jawaabaan markii maqaarkeenna la taabto ama la taabto, waxayna farriimaha u gudbiyaan aag maskaxda ka mid ah oo la yiraahdo somatosensory cortex. Laakiin sanadihii la soo dhaafay, borofisar ku takhasusay cilmiga neerfaha ee Francis McGlone wuxuu baranayey nooc kale oo fiber-ka dareemayaasha ah (oo loo yaqaan 'afferent C fibers') kaas oo sameeya macluumaad qiyaastii konton konton xawaaraha nooca kale ah. Waxay u gudbiyaan macluumaadka qayb ka mid ah maskaxda oo loo yaqaan 'cortex' insular cortex - aag sidoo kale ka shaqeeya dhadhanka iyo dareenka. Marka maxaa nidaamkan gaabiska ah u horumarey sidoo kale kan ugu dhakhsaha badan? Francis McGlone wuxuu rumeysan yahay in fiilooyin gaabis ah ay jiraan si kor loogu qaado isku xirnaanta bulshada iyadoo si tartiib ah loogu salaaxayo maqaarka. ”
Awoodda bogsiinta ee taabashada jilicsan
Adduun kor uqaadaya galmada jinsiga ah ee kacsiga badan, ee inta badan aan ahayn tusaalooyinka rabshadaha, galmada qasabka ah, waxaa qiimo leh in la xusuusto in bini'aadamku ku barwaaqoobaan taabasho naxariis leh oo naxariis leh maadaama ay naga dhigeyso inaan dareensanahay badbaado iyo jacayl, muhiim u ah wanaagsanaanta iyo badbaado.